၂၀၁၇ ပေါ်တူဂီ တောမီးများ - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၇ ပေါ်တူဂီ တောမီးများ
NASA satellite image of the fires and associated smoke plumes across Portugal on 18 June
Pedrógão Grande, Leiria, aPortugal
39°57′N 8°14′W﻿ / ﻿39.950°N 8.233°W﻿ / 39.950; -8.233ကိုဩဒိနိတ်: 39°57′N 8°14′W﻿ / ﻿39.950°N 8.233°W﻿ / 39.950; -8.233
156 total, 11 active
17 June 2017 – ongoing
၁၆၀ အတည်ပြု (၇ စိုးရိမ်ရ)
၁၇ ဇွန် ၂၀၁၇ မွန်းလွဲပိုင်း၌ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် ကြောက်မက်ဖွယ် တောမီးများ စတင်လောင်ကျွမ်းသည်။ မီးသည် ကားလမ်းက ဖြတ်သန်းလောင်ကျွမ်းသောအခါ လူများသည် သူတို့ကားထဲမှ ထွက်ပြေးရသဖြင့် ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ (Pedrógão Grande)တွင် သေဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားသည်။ မီးကို ငြှိမ်းသတ်ရန် နိုင်ငံအနှံ့မှ မီးသတ်သမား ၁၇၀၀ ကျော်ကို ပေါ်တူဂီအရာရှိများက စေလွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ဝန်ကြီးချုပ် အန်တိုနီယို ကိုစတာက နိုင်ငံတော် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း အထိမ်းအမှတ် သုံးရက် သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ မိုရော့ကိုနှင့် အီတလီနိုင်ငံတို့က မီးကူညီ ငြှိမ်းသတ်‌ပေးနိုင်ရန် မီးသတ်သမားများနှင့် မီးသတ်လေယာဉ်များ စေလွှတ်ခဲ့ကြသည်။ အစိုးရ အရာရှိ များစွာက တောမီးလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းသည် ခြောက်သွေ့သော ရာသီတွင် ဖြစ်ပေါ်သော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းကြောင့် ဟု ထောက်ပြကြသော်လည်း၊ ပေါ်တူဂီမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲကမူ တောမီးသည် ရှို့မီးသက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားသည်။
ပြင်းထန်သော အပူလိုင်း ဖြတ်သန်းခြင်းက တောမီးလောင်ရန် အစပျိုးခြင်း ဖြစ်ကာ၊ ပေါ်တူဂီ၏ ဒေသ အတော်များများတွင် ၄၀ °C (၁၀၄ °F) ထက် အပူချိန် မြင့်တက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၁၇၊ ၁၈ ဇွန်လ၏ ညအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း မီး ၁၅၆ ‌ခါ လောင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် လစ်စဘွန်းမြို့ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၂၀၀ km (၁၂၀ mi) အကွာ တောင်ထူထပ်သော ဒေသများတွင် ဖြစ်သည်။ မီးမုန်တိုင်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်မလာမီ၊ ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ မြူနီစီပယ်ဒေသန္တရနယ်တွင် မီးများ စတင် လောင်သည်။
မီးများ မလောင်ခင် ခြောက်သွေ့သော မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ ကျလာပြီး အချို့မီးများ လောင်ကျွမ်းလာသည်။ ညွှန်ချုပ်တစ်ဦးက ရဲများသည် သစ်ပင်တစ်ပင်ကို မိုးကြိုး ခသောအခါ မီး စတင် လောင်ကျွမ်းသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ ၌တည်ရှိသော ပင်ဟယ် တောအုပ်များသည် ထင်းရှူးပင်များနှင့် ကျူးကျော်လာသော အမျိုးအစား ဖြစ်သည့် ယူကလစ်တပ်ပင်များ ပေါက်ရောက်ရာ ဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်မှ စ၍ ယူကလစ်တပ်ပင်များသည် ထင်းရှူးပင်များထက် ပိုပေါများလာခဲ့သည်။
နိုင်ငံအနှံ့ လောင်သော မီးများကြောင့် အနည်းဆုံး ၆၄ ဦး သေဆုံးရာ ပေါ်တူဂီသမိုင်း၌ တောမီးကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု အကြီးမားဆုံး ဖြစ်သည်။ မီးသတ်သမား ၁၃ ဦး အပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ အယောက် ၁၆၀ ‌ဒဏ်ရာ ရသည်။ လူ ၅ ဦး၊ မီးသတ်သမား ၄ ဦးနှင့် ကလေး ၁ ဦးမှာ စိုးရိမ်ရသည်။ မီးသတ်သမား ၂ ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းလည်း သတင်းပို့သည်။
အကြီးမားဆုံး အသက် ဆုံးရှုံးမှုသည် ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီမှ တောလမ်း တနေရာတွင် ဖြစ်ပွားပြီး၊ မီးသည် ထိုဒေသကို ဝါးမြိုလိုက်သောအခါ ၄၇ ဦးသော လူတို့သည် သူတို့၏ ကားထဲတွင် သို့မဟုတ် ကားအနီးတွင် သေဆုံးသွားသည်။ သေသေချာချာ ပြောရပါက လူ အယောက် ၃၀ က ယာဉ်များထဲ ပိတ်မိ သေဆုံး၍ ကျန် ၁၇ ယောက် ခြေဖြင့် ထွက်ပြေးရာ အနီးအနား၌ သေဆုံးသည်။ နောက်ထပ် ၁၁ ဦးမှာ အိုင်စီ၈ မော်တော်ကားလမ်းအနီး၊ နိုဒေရင်ညို၌ သေဆုံးသည်။ မီးက လမ်းများကို ဝါးမြိုသည့် အချိန်တွင် မော်တော်ကားလမ်းအနီးရှိ ရေလှောင်ကန်ကြီးထဲ ဝင်ရောက် ပုန်းခိုသူ မိုဂရန်ဒီအနီးရှိ လူ ၁၂ ဦးမှာမူ အသက်ရှင်သည်။ လူနည်းစု ဒါဇင်များစွာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်မှု ခံစားရသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် အန်တိုနီယို ကိုစတာ (António Costa) က ဤ ဘေးဒုက္ခကို "တောမီးကြောင့် ဖြစ်ရသော၊ မြင်ရသမျှတွင် အကြီးမားဆုံး ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်အပျက်"ဟု ခေါ်ဆိုလိုက်သည်။ နိုင်ငံတော် ပူဆွေးမှု သုံးရက်တာကို ၁၈ ဇွန်မှ စတင်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ၁၇ ဇွန် ညသန်းခေါင်မတိုင်ခင် ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီသို့ ဆိုက်ရောက်လာသော သမ္မတ မာဆယ်လို ရီဘလို ဒီ ဆော်စာ (Marcelo Rebelo de Sousa) သည် လူအများ သတိပြု မိလောက်အောင်ပင် တုန်လှုပ်နေပြီး၊ (မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကတည်းက အခင်းဖြစ် နေရာ ရောက်နေသော) ပြည်ထဲရေး အတွင်းရေးမှူး ဂျော် ဂုမ်း၊ ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ၏ မြို့တော်ဝန် ဗာလဒီမာ ရာမို့တို့နှင့် အကြာကြီး မပွေ့ဖက်မီ၊ ဂျာနယ်လစ်များကို မိန့်ခွန်းပြောသည်။ သမ္မတသည် လေရီယာ (Leiria) သို့ ပြောင်းရွှေ့ ထွက်ပြေးလာသော အသက်ရှင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
မီးလျှံများကို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရန် ၁၇၀၀ ကျော်သော မီးသတ်သမားများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့် စပိန်တို့သည် စစ်တပ်အရေးပေါ်ယူနစ် (Military Emergencies Unit) နှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ ပါသော စုပေါင်း ရေကြဲလေယာဉ် (water-bombing planes) ငါးစီးကို ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများကို ၁၈ ဇွန်တွင် စတင်သည်။ လူများစွာသည် အနီးရှိ မြို့ အန်ဆီယောင်သို့ ထွက်ပြေးကြရာ၊ ဒေသခံများက ခိုလှုံခွင့် ပေးပြီး စောင့်‌ရှောက်ကြသည်။ အနိမ့်တွင် ဝေ့ဝဲနေသော မီးခိုးများကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်များ အကူအညီ ပေးရန် ခက်ခဲသည်။ ရှင်ကျန်သူအချို့က အစိုးရထံမှ တုံ့ပြန်မှု နှေးကွေးခြင်းကို ဝေဖန်ပြီး၊ မီးညွန့် စတင်ပြီး နာရီပေါင်းများစွာ ကြာသည့်အထိ သူတို့ဆီ မီးသတ်သမားများ ရောက်မလာပါ ဟု ဆိုသည်။ ညံ့ဖျင်းသော တောအုပ် အစီအမံနှင့် ဝေးလံသော ကျေးရွာများတွင် မလိုအပ်သော သစ်တော ဧရိယာများစွာ ထားထားပြီး လူဦးရေ နည်းပါ‌းအောင် လုပ်နေသည်ဟုလည်း အပြစ်တင်ကြသည်။
၂၀ ဇွန် မွန်းလွဲပိုင်းတွင်၊ သတင်းများအရ၊ နိုင်ငံခြား အကူအညီ ဖြစ်သော ကနေ‌ဒဲယာ ရေကြဲ‌ယာဉ် (water bomber) တစီးသည် ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ မြို့ပေါ်မှ ပျက်ကျသွားသော်လည်း၊ ပြည်ထဲရေး အတွင်းရေးမှူးက သတင်းကို အတည်မပြုနိုင်ခဲ့ချေ။ နောက်တွင်၊ မြို့ပြကာကွယ်ရေး အမျိုးသား အာဏာပိုင်က လေယာဉ် ပျက်ကျသည့် သတင်းများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး၊ ကားကြီး တစင်း ဂက်စ်ပေါက်ကွဲမှုအဖြစ် အစီရင် ခံစေသည်။
ရောမတွင် ပုပ် ဖရန်စစ် (Pope Francis)က လူထောင်ပေါင်းများစွာ ဦးဆောင်ပြီး သေဆုံးသူများအတွက် ငြိမ်သက်စွာ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်သည်။ စပိန်ဝန်ကြီးချုပ် မာရီယာနို ရဂျွိုင်း (Mariano Rajoy) က ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ၌ ဖြစ်ပွားသော ဝမ်းနည်းဖွယ် အဖြစ်အပျက်ကြောင့် မူးမေ့သွားပြီး၊ လိုအပ်သော မည်သည့် အကူအညီကို မဆို ပေးမည်ဟု တွစ်တာ‌တွင် ရေးသည်။ အိန္ဒိယ ဝန်ကြီးချုပ် နရန်ဒရာ မိုဒီကလည်း ပေါ်တူဂီ တောမီးတွင် လူပေါင်းများစွာ အသက်ရှုံးသွားကြောင်း သိရသည့်အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ ပေါ်တူဂီလူမျိုးများအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း တွစ်တာတွင် စာနာထောက်ထားမှုကို ဖော်ပြသည်။ ဥရောပကော်မရှင်၏ ခရစ္စတို စတိုင်လျံနိုက် (Christos Stylianides)က ချစ်ရသူတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ အီးယူသည် ကူညီရန် အသင့် ရှိကြောင်း၊ လိုအပ်သည့် ဤအချိန်တွင် ပေါ်တူဂီ အာဏာပိုင်များနှင့် ပြည်သူများကို ကူညီမည်ဟု ပြောသည်။ စပိန်တော်ဝင်မိသားစုကလည်း ဝမ်း‌နည်းကြောင်း တွစ်သည်။ ပြင်သစ် သမ္မတ အင်မာနျူဝယ် မာခရွန် (Emmanuel Macron)က ကြောက်မက်ဖွယ် မီးဘေးဒဏ် ခံရသည့် ပေါ်တူဂီနှင့် တစိတ်တဝမ်း တည်း ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အတွေးများသည် နစ်နာသူများနှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်၊ ပြင်သစ်သည် ပေါ်တူဂီကို ရနိုင်သော အကူအညီများ ပေးအပ်မည်ဟု တွစ်ခဲ့သည်။
၁၈ ဇွန် မွန်းလွဲတွင်၊ ရုရှား၌ ဖီဖာ မဟာမိတ်ဖလား (FIFA Confederations Cup) ကို မက္ကဆီကိုနှင့် ကန်မည့် ဖြစ်သော ပေါ်တူဂီအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းသည် နစ်နာသူများကို အောက်မေ့သောအားဖြင့် အနက်ရောင် လက်မောင်းပတ် (black armbands) များ ဝတ်ဆင်ပြီး၊ ဘောလုံး စမကန်မီ တမိနစ် ငြိမ်သက်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်း ဖြစ်၊ ပေါ်တူဂီလူမျိုးလည်း ဖြစ်သော အန်တိုနီယို ဂူတာရက်က မီးဘေးကြောင့် တုန်လှုပ်မိကြောင်း ပြောပြီး၊ ရတတ်သမျှ အကူအညီ ပေးကြပါဟု တောင်းခံသည်။ မော်လတာ၊ ဂျာမနီ နှင့် တရုတ်မှလည်း ဝမ်းနည်းကြောင်း ပြောကြားကြသည်။ ဇွန် ၂၀ ရက်စွဲဖြင့် စာတစောင်၌ ၊ သမ္မတ တိုနီ တန် ယမ်းနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းတို့က မီးဘေးကြောင့် ခံစားရသော အသက်ဆုံးရှုံးသူများနှင့် နစ်နာသူများကို စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ ကိုယ်စား၊ ဝမ်းနည်းမိကြောင်းနှင့် လှိုက်လှဲစွာ စာနာမိကြောင်း ပြောကြားသည်။ ယူရိုဗီးရှင်း သီချင်းပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၇ (Eurovision Song Contest 2017) တွင် ဆုရသူ ပေါ်တူဂီလူမျိုး ဆာလဗေဒါ ဆိုဘရယ် (Salvador Sobral)က သူ့ စီဒီခွေ ရောင်းရသမျှ အမြတ်များ အားလုံးကို ပက်ဒရိုဂေါင် ဂရန်ဒီ ပြည်သူများနှင့် မြို့ထဲရှိ သက်သာချောင်‌ချိရေး လုပ်အားပေးများသို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဟု ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇ တွင် ကြေညာသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Público။ "Ao minuto: Situação em Pedrógão ainda é "preocupante", diz Protecção Civil. Número de mortos mantém-se em 62" (in Portuguese)၊ Público၊ 19 June 2017။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Couzens၊ Gerard။ Portugal forest fire: 'British pilot' crashes plane while fighting deadly blaze။ 20 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ BBC News။ "Portugal forest fires kill 62 near Coimbra"၊ BBC News၊ 19 June 2017။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Portugal forest fires kill 61 near Coimbra"၊ BBC၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Portugal forest fires: three days of mourning for 61 victims"၊ BBC၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones၊ Sam။ "Huge forest fires in Portugal kill more than 60 people"၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Portugal: Staatstrauer wegen verheerenden Waldbrands" (in de-DE)၊ Die Zeit၊ 2017-06-18။
↑ "Polícia Judiciária afasta origem criminosa de incêndio. Um raio atingiu uma árvore" (in pt)၊ Sapo၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "O Pinhal Interior Norte onde se situa Pedrógão já é metade eucaliptal" (in Portuguese)၊ Público၊ 18 June 2017။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 6º Inventário da Floresta Nacional (in Portuguese) (February 2013)။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Portugal Fire Survivors Recount Confusion AmidaSearch for Escape။ The New York Times။ 20 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Phippen၊ Weston။ A Deadly Forest Fire in Portugal။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Portugal forest fires kill 57 near Coimbra"၊ BBC၊ 18 June 2017။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ "Portugal forest fire: 12 survive by hiding inawater tank"၊ BBC၊ 19 June 2017။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ ၁၅.၂ "At least 61 killed in forest fire still raging in Portugal"၊ Reuters၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "Many blamed poor forestry reserve planning and depopulation of remote villages that left many wooded areas untended."
↑ Incêndio em Pedrógão ao minuto: Número de mortos aumenta para 57. Trovoadas secas na origem do fogo (in pt)။ Público (17 June 2017)။
↑ Pelo menos 57 pessoas morrem no incêndio em Pedrógão Grande (in pt)။ Observador (17 June 2017)။
↑ 57 mortos no incêndio em Pedrógão Grande (in pt)။ Diário de Notícias (17 June 2017)။
↑ Lúcio၊ Susana (18 June 2017)။ Quem é Jorge Gomes, o homem do Governo em Pedrogão Grande? (in pt)။ Sábado။
↑ As imagens da emoção de Marcelo em Pedrógão (in pt)။ Observador (18 June 2017)။
↑ Seis aviones y 200 militares españoles luchan contra el fuego en Portugal (in es)။ Antena3(8 June 2017)။
↑ Avião Canadair cai em Pedrogão Grande (in pt)။ TSF (20 June 2017)။
↑ Secretário de Estado não confirma queda de avião (in pt)။ Expresso (20 June 2017)။
↑ Proteção Civil desmente queda de avião Canadair em Ouzenda (in pt)။ Jornal de Notícias (20 June 2017)။
↑ CNN၊ Julia Jones, Nicole Chavez and Chandrika Narayan။ Portugal wildfire: 61 killed, victims burned in cars as they fled။ 19 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Portugal forest fires: Three days of mourning for 61 victims, BBC, 18.06.2017.
↑ "The Latest: Portuguese soccer team sends condolences on fire"၊ The Washington Post၊ 18 June 2017။ 18 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Guterres, shocked by the Pedrógão Grande tragedy, vows to assist Portugal. 18.06.2017 (in Portuguese).
↑ Singapore leaders offer condolences for victims of Portugal forest fires, Channel News Asia, 21.06.2017
↑ Pereira၊ Bernardo (19 June 2017)။ Portugal Wildfires: Salvador Sobral Raises Money For Pedrógão Grande Relief Efforts။ WiwiBloggs။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၇_ပေါ်တူဂီ_တောမီးများ&oldid=439618" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၅:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။